Bubble Forest Farshaxanimada Guud - Joornaalka Naqshadeynta
Farshaxanimada Guud Forest Bubble Forest waa farshaxan guud oo laga sameeyay birta aashitada birta u adkaysata. Waxaa lagu iftiimiyaa laydhadhka RGB LED programm programme-ka ah kaas oo u oggolaanaya farshaxanku inuu maro metamorphosis cajiib ah marka qorraxdu soo baxdo. Waxaa loo sameeyay sidii ka tarjumaya awooda dhirta ay u leedahay soosaarka oksijiinta. Duurka cinwaanku wuxuu ka kooban yahay 18 bir oo laamood / dogob ah oo ku dhammaanaya taajjayaal ah qaab dhismeedka xawaaraha ah oo matalaya hal hawo oo keliya. Forest Bubble Forest waxaa loola jeedaa dhul gariirka iyo sidoo kale waxa loo yaqaan hoose ee harooyinka, badaha iyo badaha
Magaca mashruuca : Bubble Forest, Magaca naqshadeeyayaasha : Mirek Struzik, Magaca macmiilka : Altarea.
Farshaxanimada Guud Mirek Struzik Bubble Forest